E Zitekwuru Ndị Ozi Ala Ọzọ, Mechaa Machibido Anyị Iwu | Akụkọ Gbasara Indoneshia
N’abalị itoolu n’ọnwa Julaị afọ 1964, Ngalaba Na-ahụ Maka Okwu Ikpe n’Indoneshia debanyere aha ụlọ ọrụ Ndịàmà Jehova ji arụ ọrụ ka ọ bụrụ nke iwu kwadoro. Aha ahụ bụ Ndị Mmụta Baịbụl nke Indoneshia. Ma tupu ụmụnna anyị enwere onwe ha kpamkpam, Ngalaba Na-ahụ Maka Okpukpe ga-edebanyekwa aha ha n’akwụkwọ. Ọ bụ Ngalaba Na-eduzi Okpukpe Ndị Kraịst na-agwa ngalaba a ihe ọ ga-eme. Ndị na-arụ na Ngalaba Na-eduzi Okpukpe Ndị Kraịst bụ ndị Protestant bú okpukpe ha n’isi na-achọghị iji anya ahụ Ndịàmà Jehova.
Otu ụbọchị, otu nwanna hụrụ otu n’ime ndị isi ha na Minista Na-ahụ Maka Okpukpe na-arụkọ ọrụ. Ha abụọ chọpụtara na ha si otu ebe. N’ihi ya, ha ji asụsụ obodo ha kparịta ụka. Nwanna anyị a gwara ya nsogbu Ndịàmà Jehova na Ngalaba Na-eduzi Okpukpe Ndị Kraịst na-enwe. N’ihi ya, ọ haziri ka ụmụnna anyị atọ gaa hụ minista na-ahụ maka okpukpe. Minista ahụ bụ onye Alakụba. O nwere ọmịiko. N’abalị iri na otu n’ọnwa Mee afọ 1968, minista ahụ debanyere aha Ndịàmà Jehova n’akwụkwọ ka ọ bụrụ okpukpe iwu kwadoro n’Indoneshia. O kwukwara na Ndịàmà Jehova nweere onwe ha ịna-ezi ozi ọma n’Indoneshia.
Nwoke ahụ ya na nwanna anyị si otu ebe wepụtakwara onwe ya ịna-enye aka eme ka ndị ozi ala ọzọ anyị nweta ikike ịbata n’Indoneshia n’akpọtụrụghị ngalaba ahụ na-eduzi okpukpe Ndị Kraịst. N’ihi aka a o nyeere anyị, e zitere ndị ozi ala ọzọ iri isii na anọ n’Indoneshia n’ime afọ ole na ole.
N’ihe dị ka afọ 1968, e nweela ihe dị ka narị ndị ozi ala ọzọ atọ na ndị ọsụ ụzọ pụrụ iche nakwa ihe karịrị otu puku ndị nkwusa na narị abụọ na-ezi ozi ọma n’ebe niile n’Indoneshia. Ndị ozi ala ọzọ ahụ nyere ụmụnna anyị ndị Indoneshia ezigbo ọzụzụ. Nke a mere ka ha na-emekwu nke ọma n’ọgbakọ. Ọzụzụ a ha nyere ha dị mma n’ihi na mkpagbu ji ọsọ na-abịa.
A Gbaara Ndị Ụkọchukwu “Krismas”
N’afọ 1974, Ngalaba Na-eduzi Okpukpe Ndị Kraịst maliteghachiri ịgbasi mbọ ike ka a machibido Ndịàmà Jehova iwu. Ọga kpata kpata ngalaba a degaara alaka niile nke Ngalaba Na-ahụ Maka Okpukpe akwụkwọ na-ekwu na iwu akwadoghị okpukpe Ndịàmà Jehova. Ọ gwara ha mesie Ndịàmà Jehova ike ma ha nye ha “nsogbu.” Ihe a o kwuru bụ otú o si gwa ha kpagbuwe Ndịàmà Jehova. Ọtụtụ emeghị ihe ahụ o kwuru. Ma, ụfọdụ gbakwasịrị ụkwụ n’ihe a o kwuru machibido Ndịàmà Jehova iwu ịna-enwe ọmụmụ ihe na ịna-aga ozi ọma n’ụlọ n’ụlọ.
E kwuru n’akwụkwọ akụkọ a e bipụtara n’abalị iri abụọ na anọ n’ọnwa Disemba afọ 1976 na a machibidola Ndịàmà Jehova iwu
N’oge ahụ ihe a niile na-eme, Òtù Jikọrọ Chọọchị Ndị Dị́ n’Ụwa na-eme atụmatụ inwe nzukọ na Jakata. Obi adịghị ndị Alakụba Indoneshia mma ná nzukọ a ha chọrọ inwe. Ebe ọ bụ na nzukọ ahụ achọwala ịkpata nnukwu esemokwu, òtù a kagburu ya. N’oge ahụkwa, otú okpukpe dị iche iche si ezi ndị mmadụ ozi ọma esewela okwu. Ọtụtụ ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị chịkwa obi n’aka. Dị ka a tụrụ anya na ha ga-eme, ndị ụkọchukwu kwuru n’ebe niile na ọ bụ ozi ọma Ndịàmà Jehova na-ezi kpatara ya. Nke a mere ka ọtụtụ ndị isi lewekwuo Ndịàmà Jehova anya ọjọọ.
Na Disemba afọ 1975, mgbe esemokwu okpukpe ka kpụ ọkụ n’ọnụ, Indoneshia lusoro Ist Timọ agha. Ihe a na-akpọzi ya bụ Timọ-Lest. Ọ bụkwa ndị Pọtugal na-achịbu ya. Mgbe ọnwa asaa gachara, ha weghaara ya. Nke a mere ka ịhụ mba n’anya gbuwe ọtụtụ ndị ka mmanya. Ụmụnna anyị etinyeghị aka na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ha esoghịkwa lụọ agha ma ọ bụ kelee ọkọlọtọ. Nke a mere ka obi gbawaa ndị isi ndị agha. (Mat. 4:10; Jọn 18:36) Ndị ụkọchukwu kwanyere ndị ọchịchị ọkụ n’ikè ka ha mesie Ndịàmà Jehova ike. N’ikpeazụ, n’ihe dị ka abalị iri na ise n’ọnwa Disemba afọ 1976, gọọmenti gbaara ndị ụkọchukwu “Krismas.” Otú ha si mee ya bụ ịma ọkwa na a machibidola Ndịàmà Jehova iwu.
E Zitekwuru Ndị Ozi Ala Ọzọ n’Indoneshia
mailto:?body=E Zitekwuru Ndị Ozi Ala Ọzọ n’Indoneshia%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D302016013%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=E Zitekwuru Ndị Ozi Ala Ọzọ n’Indoneshia